Dawladda Somalia oo ku macnaysay Shil iska hor imaad Maanta ay Saraakiil iyo Ciidan ku dhinteen. – Hornafrik Media Network
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay iska hor imaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo u dhaxeeyay Ciidamo ka wada tirsan dowladda
Taliye Sanbaloolshe oo la hadlayay Warbaahinta dowladda ayaa sheegay in wixii maanta dhacay ay aheyd shil, isla markaana baaritaan dhab ah lagu sameyn doono.
“Dadka bani’aadamka waa dad qalad ka dhici karo, wixii maanta dhacay qalad halaga soo qaado, wax qorshe ah ma ahan, shil dowlada dhexdeeda ayuu ahaa, ciidamo isku mad ah oo aan dhinac kale ahayn ayaa isku dhacay”ayuu yiri Taliye Sanbaloolshe
Taliyaha Sanbaloolshe ayaa weerar kulul ku qaaday dad uu sheegay inay Mas’uuliyiin yihiin, gaar ahaan kuwo xasaanad leh oo ugala jeeday Xildhibaano, kuwaasoo uu ku eedeeyay in dhibkii dhaco ay buun buunyaan, ama si kale u dhigaan, isagoo xusay in dadkaas aanay marna ka hadlin horumarada ay wado dowladda iyo dadaaladii la sameeyay.
“Waxaa arkayay dad dhahaya dalkaan Wareegto iyo war saxaafadeed laguma xukumi karo, hadaba mooshin maa lagu xukumayaa, iyo in maalin kasta Xukuumad la rido, dowlad is heysata horumar la gaari waayo, ma saas ayaa dalka lagu xukumayaa” ayuu yiri Sanbaloolshe oo u jawaabayay Xildhibaan Mahad Salaad oo dhaliilay Go’aano ay soo saareen Hay’adaha Ammaanku.
Dhinaca kale Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya C/rashiid C/llaahi ayaa sheegay in isku dhicii maanta uu ahaa mid lama filaan ah oo aan ahayn wax qorsheysnaa, isagoo ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay iska hor imaadkii maanta.
Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sheegay in falkii maanta dhacay ay dowladda ku xun tahay, isla markaana aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin wada shaqeynta ka dhaxaysa ciidamada dowladda.
Ciidamo ka tirsan Madaxtooyada iyo Ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida ayaa maanta iska hor imaad ku dhex maray agagaarka Madaxtooyada, waxaa iska hor imaadkaas ku dhintay illaa lix askari oo uu ku jiro Sarkaal ka tirsan NISA oo lagu magacbaabo Ciise Jiijiile.